श्रुति पुत्री‘गिर्वाणी-सुरंगना’कहाँ गु’मनाम छन ? - " सुलभ खबर "
श्रुति पुत्री‘गिर्वाणी-सुरंगना’कहाँ गु’मनाम छन ?
२०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार ह-त्याकाण्डमा बाँचेका गोरख शमसेरसँग धर्मपत्नी श्रुतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिनो केही छन् भने श्रुतिको कोखबाट जन्मेका दुई छोरी गिर्वाणी र सुरंगना राणा छन् । १९ जेठ ०५८ को दरबार ह-त्याका’ण्डमा हजुरबा–हजुरआमा, मामा र आमासमेत गु’माएका यी दुई नानीहरू त्यसयता चाहिँ गु’मनामप्राय: छन् ।
उनीहरू सञ्चारमाध्यमबाट बिलकुलै टाढा छन् । सामाजिक–सार्वजनिक कार्यक्रममा विरलै देखिन्छन् । उनीहरू यति धेरै अलगावमा छन् कि, गोरखका निकट पारिवारिक सदस्य पनि गिर्वाणी र सुरंगनाबारे बताउन असमर्थ छन् । दरबार ह-त्याका’ण्डका बेला भर्खर तीन वर्ष पार गरेकी श्रुति–गोरखकी जेठी छोरी गिर्वाणी यतिबेला १९ वर्ष पुगिसकेकी छन् भने सिर्फ सात महिनाकी सुरंगना पनि १६ वर्ष पार गरिसकेकी छन्।
आमा श्रुतिसहित दरबार ह-त्याका’ण्डमा ज्यान गु’माएका शाही परिवारका अन्य सदस्यको तस्बिर देखेपछि गिर्वाणी भा’वुक बनिन्, आँसु झारिन् ।
राजा वीरेन्द्रका चिकित्सक समेत रहेका डा खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ०६९ जेठमा काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरे । प्रदर्शनीमा राजा वीरेन्द्र र शाही परिवारसँग सम्बन्धित तस्बिर थिए । डा श्रेष्ठको निम्तो स्वीकार गर्दै श्रुतिको चिनोका रूपमा रहेका दुई छोरीका साथ गोरख बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिल पुगे ।
आमा श्रुतिसहित दरबार ह-त्याका’ण्डमा ज्यान गु’माएका शाही परिवारका अन्य सदस्यको तस्बिर देखेपछि गिर्वाणी भा’वुक बनिन्, आँसु झारिन् । उनले आँसु झार्दै गरेको तस्बिर भाइरल नै भयो ।
आफूले समेत देख्न नपाएका श्रुतिका तस्बिरहरू देखेपछि भा’वुक त गोरख पनि बने । तर, अभिभावकीय दायित्वका कारण आँसु खसालिरहेका छोरीका अघिल्तिर रूने छुट उनलाई थिएन । आँसु द’बाउँदै प्रदर्शनी हलबाट बाहिरिए,। त्यसयता गिर्वाणी र सुरंगना सार्वजनिक रूपमा देखिएको भनेको अघिल्लो साल १९ जेठमा नारायणहिटी दरबारअगाडि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हो।
केही पारिवारिक जमघटमा बाहेक त्यसयता उनीहरू कुनै सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् । शाही परिवारका अन्य सदस्य जस्तै गिर्वाणी–सुरंगना सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिनुको एउटा कारण हो, केही वर्षयता उनीहरू काठमाडौँमा नहुनु । दुवै जना अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा अध्ययनरत छन् ।
दिदी गिर्वाणी बैङ्लोरस्थित एक कलेजमा स्नातक अध्ययनरत छिन् भने बहिनी सुरंगनाचाहिँ उत्तराञ्चलको देहरादुनस्थित वेलह्याम गल्र्स स्कुलमा प्लस टू पढ्दै छिन् । अघिल्लो वर्षसम्म दिदी गिर्वाणी पनि वेलह्याम गल्र्स स्कुलमा नै अध्ययनरत थिइन् । त्यहाँ गृह विज्ञानमा कक्षा–१२ सकेपछि उनी थप अध्ययनका लागि बैङ्लोर पुगेकी हुन् ।
गोरखशमशेरकी बहिनी अन्नपूर्ण राणा भन्छिन्, “मैले पनि गिर्वाणी बैङ्लोरमा स्नातक र सुरंगना देहरादुनमा पढ्दै छन् भन्ने मात्र सुनेकी छु । त्यसबाहेक थप जानकारी छैन ।”
उनीहरूलाई पढ्नका लागि किन नेपालबाट भारत लगियो त ? आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने आग्रहका साथ गोरखका एक निकट नातेदार भन्छन्, “दरबार ह-त्याका’ण्ड र श्रुतिको नि’धनसम्बन्धी प्रसंगलाई गोरख बिर्सन चाहन्छन् । त्यसैले, छोरीलाई प्रेसले नभेट्टाओस् र त्यो प्रसंग सुन्नु नपरोस् भनेर नै उनीहरूलाई भारत लगिएको हो ।”
बिहेको पाँच वर्ष नबित्दै गोरखका काखमा दुई नाबालक छाडेर श्रुति धर्तीबाट बिदा भइन्– आफ्ना आमा–बाबु र दाजु–भाइका साथ । श्रुति गुमाएको सात वर्षपछि गोरखले बैतडीकी दीप्ती चन्दसँग बिहे गरे, २१ मंसिर ०६५ मा । दीप्ती नाताले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका भाइ कृष्णबहादुर चन्दकी छोरी हुन् । दीप्ती तर्फबाट पनि गोरखकी एक छोरी छन्, सुरवी ।
“अहिले पनि नेपाल आएका बेला दुवै नानीहरू निर्मल निवास आइपुग्छन् । पूर्वराजपरिवारले गिर्वाणी–सुरंगनालाई अन्य नातिनातिनासरहकै माया दिइरहेको छ ।”
बाबु गोरखले गरेको दोस्रो बिहेलाई गिर्वाणी–सुरंगनाले कसरी लिएका छन् ? तर, माया र ममतामा कुनै भे’दभाव नगरेर आफूहरूमाथिका प्रश्नको उत्तर गोरख र दीप्तीले दिइसकेका छन् । जहाँसम्म गिर्वाणी–सुरंगनामाथि उठेको प्रश्न हो, त्यसको जवाफ गोरख–दीप्तीको बिहेकै दिन दिएका रहेछन् । नाम बताउन नचाहने गोरखकी एक नातेदार भन्छिन्, “बिहेको भोलिपल्ट २२ मंसिर (०६५) मा दाम राख्ने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमको तस्बिर हाँसीखुसीका साथ गिर्वाणी र सुरंगनाले नै खिचे । त्यस्तै हार्दिक व्यवहार त्यसयता उनीहरूले देखाइरहेका छन् ।”
साना नानीहरूका लागि आमा जत्तिको प्यारी हुन्छिन्, त्यत्तिकै प्यारा हुन्छन् मामाहरू पनि । दु’र्भाग्य † दरबार ह’त्याका’ण्डमा उनीहरूले आमा मात्र गुमाएनन्, मामा पनि गुमाए, हजुरआमा (मावलीतर्फ) पनि गुमाए । मामाघरको यो रिक्तता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पूरा गरिदिएका छन् । पूर्वराजाका सहयोगी सागर तिमिल्सिना भन्छन्, “अहिले पनि नेपाल आएका बेला दुवै नानीहरू निर्मल निवास आइपुग्छन् । पूर्वराजपरिवारले गिर्वाणी–सुरंगनालाई अन्य नातिनातिनासरहकै माया दिइरहेको छ ।”
काठमाडौँ आइपुग्नासाथ हुर्रिएर उनीहरू पुग्ने ठाउँ हो, नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रै रहेको महेन्द्र मञ्जिल, जहाँ ९० पुग्न लागेकी पूर्वमुमा बडामहारानी रत्न शाह आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्ध बिताउँदै छिन् । स्रोतका भनाइमा, काठमाडौँमा रहँदा प्रत्येक दिनजस्तो उनीहरू महेन्द्र मञ्जिल पुग्छन्, दिनभर पूर्वमुमा बडामहारानीसँग रहन्छन् र बेलुकीपख ठमेलस्थित केशर महलनजिकै रहेको आफ्नो निवास फर्कन्छन् । यसबाहेक उनीहरू कतै सार्वजनिक हुँदैनन्।
(यो सामाग्री हामीले २०७५ माघको नेपाल म्यागजिनबाट लिएका हौ)
माझीबस्ती र भ्रामक समाचारको बीचमा श्वेता